Sergio Ramos Oo Qarka U Saaran Inuu Heshiis Hal Sano Ah U Saxiixo Real Madrid.
HomeWararka Ciyaaraha MaantaSergio Ramos oo qarka u saaran inuu heshiis hal sano ah u saxiixo Real Madrid.
Kabtanka Real Madrid Sergio Ramos ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiis cusub oo hal sano ah oo uu ku sii joogayo garoonka Bernabeu.
Daafaca dhexe qandaraaska uu haatan kula joogo Los Blancos ayaa dhacaya dhamaadka Juun, taasoo la micno ah, sida ay haatan tahay, inuu si xor ah uga tagi doono kooxda isbuucyada soo socda.
Ramos ayaa loo maleynayay inuu heysto qandaraas waqti dheer ah halkii uu kordhin lahaa hal sano oo miiska loo saarey kooxda ka dhisan La Liga.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Deportes Cuatro , 35-sano jirkaan wuxuu haatan diyaar u yahay inuu aqbalo heshiiska uu kula joogo Bernabeu illaa June 2022.
Tababaraha cusub ee Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa dhawaan sheegay inuu si aad ah u doonayo inuu Ramos ku sii hayo xiddig aad muhiim ugu ah kooxda xilli ciyaareedka soo socda.
Da ‘yarkii hore ee Sevilla, oo muran la’aan looga reebay xulkii Spain ee Euro 2020, wuxuu dhaliyay afar gool isla markaana wuxuu diiwaan geliyay hal caawin 21 kulan oo heer kooxeed ah xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay.